Akaundi Hutano Ongorora -
Amazon Mutengesi Kumiswa Kudzivirira
Akaundi Hutano Kuongorora
Kutengesa Kuwedzera kweAmazon Sellers
Akaundi Hutano Ongorora
Kungofanana nemuviri wemunhu unoda kuongororwa kwehutano nguva dzese kuti ukure nekukura uye kurarama hupenyu hwakareba, account yebhizinesi inodawo kuongororwa kwe 'hutano' hwayo. Sechinangwa chekupedzisira chebhizimusi chero ripi zvaro kukura uye kubudirira kubudikidza nekuenderera mberi mukutengesa, zvakakosha zvakanyanya kuve nekukura uku pasina mabhureki kana zvipingamupinyi. Nhoroondo yakanaka yemutengesi akaenzana nekutengesa kwakanaka. Nekudaro, kuramba uchienderana neyakasiyana metric yevatengesi account hutano kunogona kunge kuri basa rakaoma. Izvi zvinotonyanya kuomarara nekuda kwemusika wakakura webhizimusi repamhepo. Kuve nerutsigiro rwekutungamira uye nekukubatsira iwe mukuchengetedza muyero pakati peakaganhurirwa Order Yekutadza Rate, Late Dispatch mwero, uye Pre-kuzadzikiswa kukanzura mwero uye kuwana kutengeswa kwakanaka kunogona kuve kukurudzira kukuru kune bhizinesi uye munguva yakareba kunodzivirira kumiswa kweiyo account.
Chikwata chedu chinokubatsira kuti uchengetedze hutano hweakaundi yako yeAmazon mukutarisa uye nekukuraira iwe kuti uchengetedze matanho akakwana ematanho anotevera:
Raira kutadza kwekudzora madhairekitori
Kubata pre-kuzadzikiswa kukanzura
Akaundi hutano cheki haingochengetedze chete kukura kwebhizinesi rakadzikama, zvakare inobatsira kuchengetedza hukama hwakanaka nevatengi. Iyo APlus Global timu yakazvipira kuita iyo e-commerce bhizinesi riite sezvinobvira kune vese.
A + Mutengesi Kudzivirirwa
© Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa
Taura neyedu nyanzvi
Mhoroi, Ndingakubatsira sei?